Warbaahinta Kenya Oo Soo Bandhigtay Waraaqo Xildhibaano Ka Tirsan UK Ay Ku Dalbadeen In La Aqoonsado Somaliland | Warmaalnews.com
Warbaahinta Kenya Oo Soo Bandhigtay Waraaqo Xildhibaano Ka Tirsan UK Ay Ku Dalbadeen In La Aqoonsado Somaliland
London (HWN)- Qaar ka mid ah Saxaafadda Kenya ayaa ku warrantay in uu sii kordhayo culayska Dawladda
Ingiriiska lagu saarayo inay dal madax-bannaan u aqoonsato Jamhuuriyadda Somaliland oo ah waddan uu hore u xukumi jiray Ingiriisku.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo turjuntay Warsidaha Media maxnetwork oo laga leeyahay Kenya isla markaana ah Hay’adda warbaahineed ee leh Telefishanka Kenya 24TV, oo warbixin ka qoray go’aankii Isniintii Toddobaadkii hore Golaha Deegaanka ee Birmingham u aqoonsadeen JSL dal madax-bannaan.
Shabakadda Media Maxnetwork, waxay caddeysay in xildhibaanno ka soo jeeda xisbiyada waaweyn Ingiriiska oo kala ahaa Xildhibaan Ian Ward oo ka tirsan Xisbiga Labour-ka, Robert Alden oo ka mid ah xisbiga Conservativeka iyo Xildhibaan John Hunt, oo ka socday xisbiga Liberal Democrat Group ay warqad wadajir ah u qoreen Ra’iisul-wasaraha UK Mrs. Theresa May iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mr. Jeremy Hunt oo ay ku booriyeen inay JSL u aqoonsadaan waddan madax-bannaan.
Mareegta Media maxnetwork waxay intaas ku dartay in Somaliland oo hore u ahaan jirtay mustacmarad Ingiriisku xukumi jiray ay xoriyaddeedii kala soo noqotay Soomaaliya 1991kii, iyadoo 28kii sannadood ee la soo dhaafay ay maamulayeen dawlado la soo doortay oo raadinaya ictiraaf caalamiya.
Xildhibaan Ian Ward oo ka tirsan Xisbiga Shaqaalaha UK, ayaa Jamhuuriyadda Somaliland ku sifeeyey xiddigta Nabadgelyadda Geeska Afrika, waxaanu ku dooday inay si wadajir ah Ra’iisul-wasaare May ugu dalbadeen inay JSL u ictiraafto qaran madax-bannaan.
Xildhibaan Ward wuxuu xusay inay Gole deegaan ahaan u middeysan yihiin Somaliland oo muddo 28 Sannadood ah dal gaar ah ahayd, waxaanu carabaabay inay tahay xiligii beesha caalamku taageeri laheyd JSL.
John Hurt oo ka tirsan Liberal Democrat Group ee golaha deegaanka Birmingham ayaa qiray Jamhuuriyadda Somaliland ay jid dheer u soo martay inay qoto xuddunta Nabadgelyada Geeska Afrika.
Sidoo kale, waxa Warsiduhu sheegay in Wakiilka Somaliland ee UK Ayaan Maxamuud Cashuur ay ammaantay isla markaana si shucuur leh ugu mahadcelisay Golaha Deegaanka Birmingham.
Geeska kalena, Shabakadda Media maxnetwork, wuxuu sheegay in Madaxweynaha JSL Md. Muuse Biixi Cabdi uu si weyn ugu mahadceliyey Golaha deegaanka magaalada Birmingham, waxaanu madaxweynuhu ku sifeeyey tallaabada ay qaadeen mid geesinimo ah oo dhiirigelinaysa Qaddiyadda aqoonsi raadinta Somaliland. Waxaanu Madaxweynuhu intaas ku daray in dalkiisu uu istaahilo in la ictiraafo.
Ugu dambeyn Magaalada Birmingham ayaa ku soo biirtay magaalooyinka Cardiff, Tower Hamlets iyo Sheffield United oo hore ugu dhawaaqay aqoonsiga qaranimadda Jamhuuriyadda Somaliland.